एउटा प्रहरी सडकमा धरधरी रुँदै भन्छन्, माइजुको बहिनी विवाह गरेको हुँ तर मेरो जिवन सबै भताभुंग भयो (भिडियो) – Ramailo Sandesh
मलाई के भएको होला ? खाली र’क्सी मात्र खान मन लाग्छ । मलाई किन भगवानले यस्तो किन बनायो होला भनेर म आफै टाउकोमा ठोक्छु । चाहेर पनि छोड्न सकेको छैन । अरु भन्दा पनि छोराछोरीको याद आउँछ । आज गाडी आएको थियो जान पाउँछु होला भन्ने लागेको थियो तर जान पाइन । श्रीमतीलाई नराम्रो त भन्न सक्दिन तर के भयो के भयो ? उनले निकै गुनासो गरे ।
काठमाडौको सडकमा भेटिएका यि पुरुष बिग्रन त चाहन्नन् तर पनि उनलाई आफै र’क्सी मात्र खान मन लाग्ने गरेको बताए । माइजुको बहिनी विवाह गरेको हुँ तर मेरो जिवन सबै भ’ताभुं’ग भयो । महामारीमा काम गर्न नपाएर भोकै भएका मजदुरहरुलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्दै जाँदा यि पुरुष सडक किनारमा फेला परेका हुन् । उनी आफै यस्तो जिवन त बिताउन चाहन्नन् तर वुटवलका यि पुरुषको जिवन भने यस्तै छ ।
सहयोग दिँदै हिँडेकी गंगा लामालाई उनले तपाईको भविष्य राम्रो होस् है भन्दै उनले आफै कुरा सुरु गरे । हजुरको भविष्य के भयो त ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, मेरो त भविष्य विग्रियो । मेरो संगैको साथी उ प्रहरी भएर काम गरेको छ तर मेरो भने यस्तो जिवन भयो । मैले मावन सेवा आश्रममा एक वर्ष काम गरेको थिए । वाग्लुगंमा ९ महिला संस्थामा बसेको थिए । तर आज गाडी आउँछ मलाई लैजान्छ होला भनेको नलिएरै गयो ।
प्रहरीमा १० वर्ष काम गरेको थिएँ । तर संगैको साथी प्रहरीले हिँज आएर सय रुपैया दिएर गयो । प्रहरी छोडेर फेरी सुरक्षा गार्डको काम गर्न थाले । तर यो र’क्सिले मलाइ के गरायो यस्तो ? १३ वर्षकी छोरी भई, उसले मलाई कति माया गर्थि । श्रीमतीले ९ लाख रुपैया लिएर गएर पसल थापेर बसेको छ ।
थानकोटमा श्रीमतीले पसल गरेर दुई छोराछोरी पालेर बसेको छ । श्रीमतीलाई नराम्रो भन्दिन । ५ वर्ष सम्म उसले पालेको छ । नराम्रो भन्न मिल्दैन तर जिवन के भयो भयो ? उनी भक्कानिदै रुन्छन् । शुवास कार्की सर्लाहीका यिनी आमा अर्कैसंग गएपछि बुवाले पनि सौतेनी आमा ल्याएपछि आफ सानै देखि घर छोडेर हिँडेको बताए । भिडियो तल हेर्नुहोस